Drano tsara indrindra Parks In Eoropa ho Vacation | Save A Train
Home > Travel Europe > Drano tsara indrindra Parks In Eoropa ho Vacation
ny Laura 30/07/2019
Train Travel Danemark, Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 25/02/2020)
Tsy misy milaza fialan-tsasatra na vakansy, tena toy ny rano zaridaina, Tsy ny hevitrao? Sunshine, gilasy, ary ny sliding nidina ny rano ny sasany tsary goavana indrindra dia ny fomba fahandro ho an'ny voly mandritra ny Summer Holidays! Izahay no nanao ny asa sarotra ny mizaha toetra ny ny Best Water Parks any Eoropa ny tenantsika mba hanome anao ny tena marina tatitra azy fa afaka! Ireto ny drano tsara indrindra any Eoropa zaridainam-panjakana ho anao sy ny fianakavianao mba hankafy.
Lalandia - Billund, Danemark
Tamin'ny toe-po ho an'ny sasany Nordic traikefa nahafinaritra? Zahao hoe Lalandia, ny lehibe indrindra any Skandinavia rano zaridaina, ary iray amin'ireo tsara indrindra tany Eoropa Parks Rano. Mampiseho fantina ny fianakaviana-namana tsary, isika, indrindra fa tia mitaingina ny Octopus! Ny taona no mampiseho aza, rehefa manaraka asongadina ao amin'ny lisitra momba ny valan-javaboary ity dia ny mafana ny dobo sy mahatahotra kamo Stream!
miverena ity diany ho any an-panabeazana iray ihany koa. Ankizy no mankafy ny Cave Pool, izay afaka mandinika vatohara sy ny vahiny trondro. Tsy mazoto ny horita? Ary izany dia azo antoka fa hahafinaritra ny fancy; Ray aman-dreny dia afaka miaina maniry mafy ny hiavian'ny mora fialam-boly ao amin'ny aromatherapy saunas! Maty! Aoka ny ankizy mankafy ny Aqua rano hanosotra tokotanin-tsekoly, ny Monky Tonky playland an-trano, na rehefa mandeha ianao Bowling vatany avy.
Misy ihany koa ny rano kely dimy tsary ho an'ny rano kely tia. Bonus: Lalandia no misy in Billund, izay LEGOLAND-pianakaviana iray hafa goavana antsapaka!
Tropical Island Amazonia - Brandenburg, Alemaina
Ho gaga izahay rehefa izay no nahitanay ny sasany amin'ireo tsara indrindra any Eoropa Rano Parks any amin'ireo firenena fa amin'ny ankapobeny farany mangatsiaka indrindra ho amin'ny tsara indrindra Winter volana. Tropical Island Amazonia in Brandenburg, Alemaina tsy afa-tsy.
Any tokony ho ora ny fiara avy ao amin'ny foibe fiantsonana in Berlin, Tropical Island Amazonia dia goavana 35,000-metatra toradroa-drano-mahafinaritra-paradisa. Best of rehetra? Izany taona rehetra manodidina misokatra! Yep, izany vanim-potoana efa-Indoor-ivelan'ny trano South Pacific-nanana lohahevitra attraction! Izany dia manasongadina ny 27 metatra-drano avo-tsary tilikambo, ny an-trano ranomasina, mafana Lagoon, ary ny kiddie dobo rano amin'ny latabatra kilalao.
Reraka ny ho lena, fa mbola te-hanana fahafinaretana? Tsy manahy, sonia ho manodidina ny mini-Golf na maka rivotra baolina fingotra kilalao iray mitaingina. Nature-be fitiavana ny fianakaviana ihany koa ny mankafy ny valan-javaboary an-trano-orana ala, izay manasongadina 50,000 zavamaniry manerana izao tontolo izao. Toy ny ankamaroan 'ny rano efa nifidy zaridaina, misy zavatra ho an'ny ray aman-dreny, koa! Olona iray ve miteny loungers fefy sy ny fanorana dobo? Count antsika amin'ny!
Berlin ho any Munich Lamasinina
Water Park Splashworld -- Avignon Frantsa
Izany ny voalohany sy lehibe indrindra rano-nanana lohahevitra zaridainam-panjakana any Frantsa, toerana in Provence faritra, akaikin'i Avignon, afaka manome anao mitaingina-pianakaviana, faritra ho an'ny ankizy kely, hafa ny rano tsary, renirano lehibe indrindra kamo in Eoropa ary koa ny lehibe indrindra onja simulator eto amin'izao tontolo izao. Valan-javaboary ity rano ity dia misokatra mandritra ny vanim-potoana fahavaratra (tamin'ny Jona ka hatramin'ny Septambra) ary ihany koa mety ho an'ny olona manana fahasembanana.
Ahoana no hanatratra Hanosotra World WAtera Park?
Splashworld no misy 17 Km Avignon, izay mahatonga azy mora foana idirana! koa, ny fiara fitateram-bahoaka akaiky ny fiantsonan'ny izay mampifandray ny rano zaridaina amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby ny Avignon, manome fahafahana ho an'ireo nandeha bisy na lamasinina avy amin'ny hafa toerana any Frantsa ho tonga haingana ny Splashworld!
15 ny 17 dobo Misokatra taona rehetra manodidina ary iray amin'ireo dobo an-trano lehibe dia mifandray amin'ny dobo mafana ivelan'ny trano misokatra ihany koa mandritra ny taona. Ny farihy ahevaheva sy ny onja dobo manoloana ny rivotry ny dranomasina fety. Ny dobo dia goavana Surf! Tsy azo ampiasaina amin'ny zana-kazo manokana nitombo ny fampiasana an-trano ary koa miaraka amin'ny birao.
Raha mitady fanazaran-tena sasany misy 25 M (82 Ft) dobo filomanosana sy ny 3 M (10 Ft) antsitrika tilikambo. Ny traikefa nahafinaritra dobo an-trano tolotra 11 tsary amin'ny efa ho tanteraka halavan'ny 1 km (0,6 kilaometatra). Ny avo indrindra tsary maka anao eo amin'ny mitaingina mampientam-po avy amin'ny 17 M (55 Ft). koa, misy lehibe-tsary mandritra ny telo miara- olona ary koa ny tongolo tsary sy ny 180 M (590 Ft) tendrombohitra ela river, akaikin'ilay amin'ny hantsana vato, raha mahatsiaro sahisahy.
Paris ho any Avignon Lamasinina
Tsara ny Avignon Lamasinina
Marseilles ho Avignon Lamasinina
Ny Favorite Haka rano ho an'ny Best Parks any Eoropa dia: World Water Park Caneva, Italia
Lake Garda aoka halaza noho ny fiadanana sy ny filaminana, fa Caneva World zavatra tena mampihorohoro ny. Io roa whammy ny foto-kevitra zaridaina dia nizara eo amin'ny Movieland sy Acquapark.
Get akaiky ny Action sarimihetsika amin'ny Overdrive Live Set, mihantona ny seza tao amin'ny John Rambo Stunt Show, dia hampiato ny tsy finoana ny Illusionist fampisehoana. Misy mitaingina amin'izy mianakavy rehetra, tsy nidobodoboka be rano eny amin'ny Kitt Super Jet, ny kirina havoana amin'ny Hollywood Action Tower ary ny mampihorohoro Diabolik Invertigo Montagne russe.
Raha mahazo zavatra rehetra somary mafana loatra, mitsoraka any Caneva Aquapark ka haninjitra ambanin'ny hazo rofia, ao amin'ny aloky lehibe volkano! Fa amin'ny dobo onja lehibe sy mahavariana toy ny rano tsary Twin Peaks, Anaconda ary Sherry misy zavatra be dia be mba haka fanahy anao eny amin'ny tora-pasika.
Mitohy ny fialam-boly amin'ny Moyen Âge Times Restaurant & Show -- seza ny tenanao teo amin'ny Moyen Âge lapan'ny ary ho vonona ny Knights, soavaly, ary lehibe ny fifaninanana jousting!
Vonona ny entana ny swimsuit dia handeha amin'izay dia lavitra mba hahita ny tsara indrindra tany Eoropa Parks Rano? Eny milay! Vaovao tsara indrindra mbola, dia afaka mahazo ny toerana rehetra ireo mora foana miaraka amin'ny fanampian'ny SaveATrain ! Tsy misy miafina sarany fanampiny, ianao mandany bebe kokoa amin'ny mitaingina mahatahotra sy ny fotoana tsara! Summer boky vao fety, ankehitriny!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-water-parks-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby -- https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / en na / de kokoa fiteny.
Train Tsidika, Train Travel Aotrisy, Train Travel Frantsa, Train Travel Italia, Train Travel Soisa, Travel Europe
Train Travel Aotrisy, Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Train Travel Norvezy, Train Travel Scotland, Travel Europe
Nahoana no Tokony Order ny saran-dalana Online?
Business Travel ny Train, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Feb 2020Mar 2020Apr 2020Mey 2020Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept-pahatonga ny taona 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021